Igama labapostile abalishumi elinambini Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ibhayibhile isibonisa Igama labapostile abalishumi elinambini Kwaye nokuba ingabo abanike ubungqina bamandla kaThixo ngokuqondwa kwemiqondiso nokushunyayelwa kweendaba ezilungileyo, abapostile bokuqala nabachazayo ababenoYesu kwaye abamshiyanga emva kokwazi ukuba batye umzimba wakhe. igazi lokufumana ubomi obungunaphakade.
1 Igama labapostile abalishumi elinambini ababehamba noYesu
1.2 USantiago omkhulu
1.3 USantiago Omncinci
1.7 UYuda Sikariyoti
1.8 UJudas Thaddeus
Igama labapostile abalishumi elinambini ababehamba noYesu
Abapostile abaphambili yayingu: Pedro, Tomás, Andrés, Felipe, Santiago, Santiago unyana ka-Alfeo, Judas Tadeo, Judas Iscariot, Juan, Mateo Simón noBartolomé. Masibone ezinye zazo:
USimon Peter, wayengumlobi weentlanzi owayehlala eBetsadia naseKapernahum, wayeyinxalenye ye-Inner Circle kwaye wabhala iincwadi ezimbini zeTestamente eNtsha ezaziza kuthi kamva zibize igama lakhe. Wayeyintloko yokuqala yeCawe yakhe, washiya ikhaya lakhe elaliseKapernahum ukuze ajoyine abafundi bakaYesu, kwimizuzu yokuqala yokushumayela kwakhe.
USan Pedro wahlukaniswa bubuntu bakhe obomeleleyo nokusondela kwakhe kutitshala, okukhokelela kwisikhundla sokuba sisithethi qela seqela, kunye noSantiago Apóstol noSan Juan Evangelista, uPedro uthathe inxaxheba kuwo wonke umsebenzi kaYesu.
Wayengomnye wabalandeli bokuqala ababandezeleka ngokwenyani kwaye bamfela uYesu, umntakwabo Yohane uMvangeli, wayengomnye wabo bazibonela ngawakhe amehlo ezi ziganeko zibini zibalulekileyo ebomini bukaMesiya, oko kukuthi, bazibonela ngawabo amehlo umzuzu wokwenziwa kumila kumbi kwiNtaba yeTabhore kunye nomthandazo kwiGadi yeminquma. Wayekwangqina elixhonyiweyo ukubona ukubonakala kukaYesu ovukileyo kunye nokuloba okungummangaliso kulwandle lwaseTibheriya.
Emva koko ukufa kaKristu, uSantiago wayedibanise ukuba iqela lokuqala lecawa yaseYerusalem, yayingumfel 'ukholo wokuqala phakathi kwabaPostile.
Eyaziwa nangokuthi nguSantiago, unyana ka-Alpheus kwaye ubonwa njengomntakwabo Judas Thaddeus, ngokwesiko lobuKrestu, uSantiago ubizwa ngegama kwiNcwadi yamaGalati njengenye yeentsika zebandla, awayekunye naye, ngexesha leBhunga lase Yerusalem. inkokheli yoluntu apho uPedro ethembele ngokuzithemba ukuthetha ngenkululeko yakhe kwaye wathabatha iintambo zecawe yeso sixeko.
UJohn wayengumpostile kaKristu okholelwa ukuba wabhala iVangeli yesine, incwadi yeSityhilelo, kunye neencwadi ezine ezibonisa ukuba ungubani. Kunye nomntakwabo uSanta James uMpostile, wayengomnye wabapostile bakaKristu bokuqala. Bebonke kunye neSan Pedro benze eyonayona ndawo isondeleyo kutitshala.
Emva kukaPeter, mhlawumbi le yenye yezona zidume kakhulu phakathi kwabapostile, yena nomntakwabo uYakobi bangqina kunye noPetros kwiziganeko ezibalulekileyo zobulungiseleli basemhlabeni boMsindisi, bemamele iintetho ezifana neNtshumayelo yaseNtabeni eyalungiselela uYohane lo mzuzu. apho uYesu wambiza ukuba abe yinxalenye yabafundi bakhe.
Wayesaziwa njengo-Saint Andrew, wayengumntakwabo-Peter omdala, wayengowokuqala kubalandeli bomprofeti u-Yohane umBhaptizi, obungqina bakhe babubhekisa ku-Andrew ku Yesu, kwaye ke waba ngowokuqala ukulandela uYesu, yena nomntakwabo UPedro yayingabalobi ngomsebenzi wabo.
UAndrew ukhankanywa njengomnye wabafundi bakaYesu abasenyongweni, ngokuba nguvulindlela ekufumaneni igama lokuba ngumfundisi wasemazweni eKhaya nakwamanye amazwe, wafundisa eSitia, eGrisi naseAsia Minor.
Waziwa ngokuba nguNathaniyeli, waba ngumpostile kaYesu ngenxa yongenelelo lomhlobo wakhe uFilipu, owamazisa ngoMesiya. Wayehlukaniswe liqela lakhe kwizinto zelizwe kunye nothando lwakhe lwezulu, wayeyindoda eyanikela ngomphefumlo nomzimba kwimishini eyayiphathisiwe.
Ukhankanyiwe kwiiVangeli ezintathu ekunye noFilipu, waziwa ngcono njengomvukeli, kwaye wakwazi ukungqina ngovuko lukaYesu. UBartholomew waya kushumayela iindaba ezilungileyo eIndiya, apho washiya khona ikopi yeVangeli likaMateyu ngesiAramaic, isithethe sikwasasaza ubuKristu kwilizwe laseCaucasian kunye no-Saint Jude Matthew, bobabini abathathwa njengabangcwele beArmenian Apostolic Icawa.
UJudas Iskariyoti, wayeyindoda eyaba ngumngcatshi, wayengumJuda onoburhalarhume owaphendukela kuYesu ngethemba lokuba izimvo zakhe zingaphunyezwa, abanye abafundi babengamaGalili, wayesaziwa njengongxowa-mali weqela. kwaye wayephakathi kwabo babekhokela iincoko.
Ebhayibhileni kubaliswa njengalo mlandeli ungcatshi owaxelela amadoda eSanhedrin, kwindawo apho babamba khona iNkosi yabo. UJudas wayengomnye wabapostile ongaziwa ngobizo lwakhe okanye xa wajoyina abafundi, kodwa kwiVangeli likaYohane ubeka into ebalulekileyo kwizenzo zikaYudas ekubeni, njengongxowa-mali, uYudas wabela igolide eyenzelwe amahlwempu.
U-Judas Tadeo wakhankanywa njengomntakwabo Yesu, kwaye yile yokuba umelwe ngokufuthi ecaleni komfanekiso kaYesu, ngamanye amaxesha wayenza ngohlobo lwembasa. Isithethe samaKatolika simnqula njengongcwele wexesha elinzima nelomeleleyo. Yayibizwa ngamanye amagama anje nge San Jerónimo de Estridón, yiyo loo nto ibizwa ngokuba yi-Trinomium, ngamagama amathathu.
Wayesaziwa njengoLevi, kwaye njengendoda ekrelekrele yolwazi oluninzi, elumkileyo kwaye enobuchule, ekholelwa ukuba wazalelwa eKapernahum, uMateyu wayeyindoda esisityebi enomzi ozinzileyo. UMateyu washumayela iindaba ezilungileyo kumaJuda kangangeminyaka eli-15, kubandakanya namaJuda ase-Ethiopia.
Wayengumqokeleli werhafu, wazo zonke izizwe kwi el mundo, AmaYuda ayeluthiyile kakhulu olu hlobo lwabasebenzi, kuba umYuda ozinikeleyo nguThixo kuphela owayemele ahlawulwe irhafu, ngenxa yeso sizathu wayethiyiwe, kungekuphela nje kwinkolo kodwa kwanangenxa yokuba uninzi kubo babengenabulungisa.
Ukuba ulithandile inqaku, ndiyakumema ukuba ufunde: "Umthandazo wokuphilisa"